Ungancoma yini ukuthenga ama-backlink kusuka kubhulogi wenethiwekhi (i-PBNs)?
Kepha mina, angikwazi ukuncoma, futhi angibonisi kahle ukuthi ubani okufanele aqale kuqala. Into yokuthi mina angizizwa nginjenge-Grey-Hat SEO, noma uNkulunkulu angavumeli i-Black-Hat SEO. Futhi ukuthenga ama-backlink kusuka kubhulogi wenethiwekhi yangasese kuyisimiso esiyimfihlo esinqunyiwe yi-Google kakhulu. Ngikholelwa ukuthi ukukhokhelwa emuva kwe-backlink kusuka kubhulogi yenethiwekhi (i-PBNs), kungakhathaliseki ukuthi baphumelela kangakanani okwamanje, cishe indlela elula yokuthola ukuzisola okusezingeni eliphezulu futhi okungenakuphulukiswa (ngezinye izikhathi ngisho nokungaqondakali).
Noma kunjalo, amabhulogi wenethiwekhi yangasese ayathandwa kakhulu manje, futhi ngibone nabaningi be-webmasters abanobuchule abajabulela lesi sabelo futhi bazuza ngokuqhubekayo okusheshayo nokuhle okulinganiselwe ku-SEO. Kodwa liyini iqiniso? Ungathatha kanjani isinqumo esenziwe kahle mayelana ne-backlink kusuka kumabhulogi wenethiwekhi? Ake sizame ukwenza konke kucace - nje ngamaqiniso amaningana abandayo kanye neziphakamiso zami ezimfushane zokulinganisa izinzuzo zabo nokuqeda. Ngemuva kwalokho, kungukuthi kuphela ukuthi unqume.
Ama-Backlink kusuka ku-Network Blogs ayenzelwe:
Ukuba ne-SEO, ngisho ukuthi ungathola inzuzo enamandla ngaphezu kwabancintisana nabo. Konke kulula - ukuthenga izixhumanisi kusuka ku-PBNs kusho ukuthi ukhululekile ukwenza ngezixhumanisi zakho ngezifiso njengobuqili ukuze uvivinye noma yikuphi okukhethwa kukho okuzixhumanisayo ngokwabo kanye nama-anchor awo. Yebo, isici esibukeka ngokungahleleki - ngenxa yokuthi ayikho enye isu enikeza leyo nkululeko yokuhlola konke okusebenzayo - lapha nakwamanje.
Ukuzuza kusuka kusiphathimandla esiphezulu ngokushesha, njengama-PBNs ungasebenzisa igunya elidala nelinokwethenjelwa kwewebhusayithi ekhona kakade - ngaphandle kokulibaziseka. Ukuthenga ama-backlink kusuka kubhulogi wenethiwekhi kungabonakala kukukhangayo nakakhulu, ikakhulukazi ucabangela ukuthi lolu hlobo lwezixhumanisi luyinkimbinkimbi ngokukhethekile ukwakha ngendlela engokwemvelo.
Ukugcina isikhathi esiningi nemizamo, ngoba nje ukubheja ku-PBNs - akudingeki usebenze nobuhlobo bokufinyelela noma ukwakha. Ngokuqondene nami, umsebenzi onzima kangaka wokuthola amathuba afanele ekufinyeleleni kuzo kungenzeka ukuthi yimizamo eyingozi kunazo zonke engake ngaya nazo.
Ngenkathi i-PBNs yinkimbinkimbi enesikhathi esilungile, bayashiya umnyango ovulekile ukubhekana nezinselele ezinzima ekuqhakambiseni ukuxhumana kwesiko. Ngisho, ngokwesibonelo, ukuthi ngezinye izikhathi cishe akunakwenzeka ukuthola lezi backlink eziphezulu ze-PR ezivela ezindaweni ezindala nezithembekile. Ukwenza kubonakala kungekuhle ukuphathwa ngisho nangaphambi kokuba ufike kuso, okungenani ngaphandle kokuphula imigomo. Ngemuva kwakho konke, ukutshala isikhathi sakho nomzamo ekwakheni ubuhlobo obuseduze noma noma yikuphi ukufinyelela okukhululekile - akukwazi ukukunikeza noma yini okulindelwe noma imiphumela ebonakalayo, hhayi ukusho intuthuko eqinisekisiwe yobambiswano obuhlala njalo.
Nazi ezinye zezinto ezimbi kakhulu mayelana nama-backlink kusuka kumabhulogi wenethiwekhi, ngenxa yokuphelela. Esimweni esinzima kunazo zonke, ukusebenzisa i-PBNs yokwakha isixhumanisi kungaholela ekujezisweni okungokomthetho - ngezinye izikhathi kungadlulela lapho yonke into iphetha ngokuvinjelwa unomphela ekusesheni. Uma kufanele kwenzeke kanjalo, bekungekho lutho ongakwenza, ngaphandle kokwakha iwebhusayithi yakho engalungile noma ibhulogi njalo-kusukela ekuqaleni Source .